Trump oo iska fogeeyay guuldarrada Alabama - BBC News Somali
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa iska fogeeyay Roy Moore ka dib markii ay guuldarro taariikhi ah ka soo wajahday gobolka Alabama oo si wayn u taageeri jiray xisbiga Jamhuuriga.
Ol'olihii doorashada ee Moore waxaa hareeyay eedaymo ku saabsan in uu dumar badan si xun ula dhaqmay inkastoo uu diiday eedaymahaas.
Trump ayaa xataa Fariin taleefanka ugu duubay murashixii Jamhuuriga ee eedaymaha la'daalaa dhacayay maalmo uun ka hor intii aysan doorashadu dhicin.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Bisha Laba iyo Tobnaad 2017
Wuxuu intaas ku sii daray haddii ay jirto wax ay doorashadan xaqiijisay, waa in ay xaqiijisay in xisbiga Jamhuurigu uu u baahanyahay in uu murashaxiin ka dhigto dad miisaan leh si loo kordhiyo aqlabiyadda aadka u yar ee labada aqalba ee wakiillada iyo kan Senate-ka.
Donald Trump oo afka ciida loo daray
Seneterkii saddexaad ee Mareykan ah oo toddobaadkaan iscasilay
Jones ayaa shir jaraa'id oo uu Arbacadii qabtay ka sheegay in ay soo waceen madaxweynaha Maraykanka Donald Trump, hogaamiyaha xisbiga Dimuqraadiga Chuck Schumer iyo Senater Mitch McConnell.
Wuxuu sheegay in Trump "uu si naxariis leh" oola hadlay markii uu taleefanka u soo diray uuna ku marti qaaday Aqalka Cad ee Maraykanka looga arrimiyo.
Jones ayaana intaas ku sii daray in aysan wali wada hadlin Moore.
Kursiga Alabama waxaa sannadkan horraantiisii banneeyay xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions.